Guuleed oo shaaciyay waqtiga ICJ ku dhawaaqayso go'aanka Kiiska Badda | KEYDMEDIA ONLINE
Mahdi Guuleed ayaa kamid ah Kooxda loo xil-saarey u doodista Kiiska Badda, waxaana uu shaaciyay in ICJ ay soo saari doono dhawaan go'aankeeda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Mahdi Guuleed Khadar, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa Maanta shaaciyay in Maxkamadda ICJ ay ku dhawaaqi doonto go'aanka kama dambeysta ah ee dacwaddda Badda 12-ka bisha October ee 2021.
Wuxuu sheegay in ICJ ay cadeyn doonta cida leh badda ay Kenya muranka gelisay, taasoo soo jiitamayesay mudo ka badan 10 sano, iyadoo soo martay heerar kala duwan, oo labada dalka xiriirkooda dhaawacay.
ICJ ayaa labo maalin dhageysatay Dacwadii Soomaaliya u gudbisay 2014 [halkan ka akhri], iyadoo Kenya ay diidey inay ka qeybgasho dhageysiga, waxaana Maxkamadda sheegtay in go'aankeeda uusan ahayn mid rafcaan laga qaadan karo.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku muransan dhul-badeed gaaraya in ka badan 100,000KM oo isku-wareeg ah, oo ku jira shidaal badan, oo la sheegay in Shirkado labada dhinac u kala saxiixeen qandaraaska lagu soo saarayo.
Keydmedia ayaa ahayd warbaahintii ugu horeysay oo kiiskan si qoto dheer wax uga qoray 10 sano kahor, iyadoo daabacday warbixino badan oo tooshka ku ifiyay qaladaadkii jiray iyo sida siyaasiyiinta kiiskan u maareeyeen.